Friday January 17, 2020 - 17:52:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo saaka deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe ku dhaxmaray ciidamada Xarakada Al Shabaab iyo maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dagaalka oo ahaa mid gaadma ah ayaa dhacay aroortii hore ee maanta oo jimca aheyd waxaana lagu beegsaday saldhig weyn oo maleeshiyaadka dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Xaaji Cali ee hoos taga degmada Cadale ee dhacda xeebta Sh/dhexe.
Ciidamada Xarakada Al Shabaab ayay usuurtagashay in ay cagta mariyaan saldhigga ciidamada iyagoo laayay askar islamarkaana gacanta ku dhigay gaadiid nuuca dagaalka ah iyo saanado melleteri.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalkii saaka ka dhacay Xaaji Cali lagu dilay ugu yaraan 5 askari oo uu kamid ahaa taliyihii heystay ciidamadii goobta ku sugnaa iyo saraakiil kale, dadka lagu dilay dagaalka waxaa kamid ah Abaanduule Cabdi Kariin Hilowle.
Wararka ayaa intaas ku daraya in dagaalkii Xaaji Cali lagu dilay taliye Abuukar Axmadeey Abuukar oo kamid ahaa saraakiisha caanka ah ee ciidamada dowladda.
War kasoo baxay taliska ciidanka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in dagaalkii saaka lagula wareegay laba gaari nuuca Cabdi bilaha loo yaqaan, dhaawacyada ciidamada dowladda gaaray ayaa lagu qiyaasayaa illaa 5 askari, dadka deegaanka waxay sheegeen in ay arkayeen xoogaga weerarka qaaday oo agabyo melleteri ka daabulanaya saldhigii ay dagaalka ku qabsadeen.